Reuzel - Grooming Tonic 350ml | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › New Arrivals › Reuzel - Grooming Tonic
Normal (350ml) - MMK 38,000 MMK Big (500ml) - MMK 50,000 MMK
အမျိုးအစား: စွယ်စုံသုံး အောက်ခံပုံသွင်း Tonic အရည်
--High Volume | Low Shine | Adds Extra Hold Styling Tonic--
Modern Gentlemen တိုင်းနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ Barbershop တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် ကမ္ဘာ့နံပတ် 1 လူသုံးအများဆုံး စွယ်စုံသုံး ပုံသွင်း Tonic အရည်...
ဆံပင်ပုံစံကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ထိန်းအားကောင်းကောင်းနှင့် တာရှည်ပိုခံစေပြီး၊ ဆံပင်ကို Low Shine ဖြင့် အစိုဓာတ်ပေးခြင်းကြောင့် ပုံသွင်းရာတွင် ခေါင်းလိမိးဆီခြောက်ကပ်ခြင်းများလျော့နည်းစေကာ၊ ဆံပင်ပုံစံထူထူထဲထဲ၊ ခပ်မြင့်မြင့်ကိုမှ လိုချင်သူမိတ်ဆွေတို့အတွက်...
Reuzel - Grooming Tonic သည် Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှ ဆံပင်အတွက်အကျိုးရှိသောအဆီများနှင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး သင့်နေ့စဉ်ခန့်ညားမှုအတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့်အကျိုးပြုပါသည်။
Pre-styler အဖြစ်ကော တစ်မျိုးတည်းသီးသန့်ပါအသုံးပြုနိုင်ကာ ဆံပင်ပါးသူများအတွက် ထူထူထဲထဲပုံစံများပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ဆံပင်ထူသူများအတွက် ခေါင်းလိမ်းဆီများလိမ်းရချောမွေ့စေသည့် Gentlemen တိုင်းအတွက် ရှိထားသင့်သော နေ့စဉ်အသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးသောကြောင့် ဦးရေပြားခြောက်သွေ့သူများနှင့် ဗောက်ထသူတို့အတွက်လည်း နေ့စဉ်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
Pre-styler အဖြစ် ခေါင်းလိမ်းဆီမလိမ်းခင် လိမ်းပေးပါ။ သို့မဟုတ် ခေါင်းလျှော်ပြီးခါစ ရေအနည်းငယ်စိုနေသောဆံပင်တွင် အောက်ခံလိမ်းပေးပြီး၊ Blowdry လေမှုတ်အခြောက်ခံပုံသွင်းပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်ပုံစံ Foundation ကောင်းကောင်းကိုရစေကာ၊ ဆံပင်ကိုထူထူထဲထဲရှိစေရုံသာမက သင့်ဆံသားမပျက်စီးစေရန် အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
သင့်စိတ်ကြိုက်ခေါင်းလိမ်းဆီကို အပြီးသပ်လိမ်းပေးပြီး ပုံသွင်းပေးခြင်းဖြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီခြောက်ကပ်ခြင်းများကို လျော့နည်းစေကာ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ် Volume မြင့်မားပြီး ထိန်းအားအလွန်ကောင်းသော သင့်စိတ်တိုင်းကျ ဆံပင်ပုံစံကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်မျိုးထဲသီးသန့်အသုံးပြုပေးခြင်းဖြင့် သဘာဝဆန်ဆန် Light Hold Control ရှိပြီး သင့်ဆံသားအတွက် အကျိုးရှိစေသော အစိုဓာတ်ကိုရရှိစေကာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆံပင်ပုံစံကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းလိမ်းဆီလိမ်းပြီးဆံပင်ကို ခေါင်းပြန်လျှော်လိုခြင်းမရှိပါကလည်း Reuzel - Grooming Tonic ကို အသုံးပြုပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်ပုံစံကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်ပုံသွင်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာကြာအသုံးခံမည့် 350ml ဘူးကြီး ပမာဏပါဝင်ပြီး၊ သင်းပျံ့သော Rum Cologne ရနံ့ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော သင့်တာရှည်ခံမည့်ဆံပင်ပုံစံအတွက် ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံး pre-styling and multi-purpose tonic အရည်ဖြစ်ပါသည်။
သဘာဝဆံပင်အရောင်တောက်ပစေမှု Low Shine
Fresh Rum Cologne ရနံ့
Reuzel - Grooming Tonic isatool every man needs on his shelf. You need to addalittle extra boost to fine hair, this is just the thing. If you useablow dryer, it’ll protect your hair. And if you wantanatural look, this tonic can stand on its own.
It createsalong-lasting but natural feeling hold. Perfect for blow-drying and all types of thermal styling, grooming tonic is ideal when volume or texture is desired.
Holland's Finest & World's Most Loved blow dry tonic
Provides Low Shine
Adds Moisture & Slickness to Hair
Fresh Rum Cologne Scent